Ngwaọrụ akpaaka netwọkụ | Motadata
Ngwaọrụ akpaaka netwọkụ
Nọgide na-akwado ya
Mee ka netwọk gị bụrụ ntụkwasị obi, ntụkwasị obi na ọgụgụ isi
Kwesịrị ntụkwasị obi, echekwara na akpaaka
Jiri anya nke uche hụ ihe ndabere ọhụrụ na nke dara ada, nkesa ngwaọrụ, ọnọdụ ọdịda, yana ọtụtụ ihe ndị ọzọ na Otu Platform jikọtara ọnụ. Mezue mkpesa Dashboard site na mbupụ nghọta Dashboard n'ime faịlụ PDF/CSV.
AI-Driven Automation netwọkụ
nhazi nhazi ka tinye nhazi, mkpesas, chọpụta mgbanwe ndị na-apụtaghị na usoro, nyochas na ndabere.
Nhazi AI-chụpụrụ: Hazie netwọk gị na AI-Driven Automation netwọkụ, na-eme ka netwọk gị dịkwuo mma na ahụike karịa mgbe ọ bụla.
Nhazi akpaaka maka Mgbanwe, Ndabere & Weghachi: Mee ka mgbanwe nhazi dị mgbagwoju anya na-emegharị ugboro ugboro kama iji aka mee ọtụtụ ngwaọrụ.
Advanced Mmezi ya na Runbook: Njikọ Python na-eme Runbook remediation tolitere na inye ike na nlekota oru na ikike nchọpụta nsogbu.
Sistemụ Ntị nwere ọgụgụ isi
Na-anọ na nche mgbe niile site na iji sistemụ nche smart. Nọgidenụ na otu nzọụkwụ n'ihu na dozie nsogbu ahụ ọbụna tupu ha emebie ihe ọ bụla.
Gbanwee Nyocha & Njikwa: Nọgide na-eme mgbanwe nhazi site na iji ọkwa wee lelee mgbanwe ndị emere. Nweta ohere dabere na ọrụ maka njikwa zuru oke na onye nwere ike ịme mgbanwe na ngwaọrụ & nhazi.
Nyocha: Hazie ndekọ ndekọ ego wee nweta nghọta dị ike nwere ike ime site na iji akụkọ nyocha.
Akwụkwọ edemede: Ngwá ọrụ ahụ na-egosi mgbe ọ bụla mgbanwe dị na nhazi ngwaọrụ, si otú ahụ na-enyere gị aka ngwa ngwa dochie mmewere dara.
Nchekwa karịa mgbe ọ bụla
Chọta faịlụ ndabere ngwa ngwa na mkpa nke awa site na ime ka usoro dị mfe dị ka ịkọwapụta njehie nhazi, ịhazi oge nkwado ndabere na mpaghara, na ebe nchekwa na-emezu scripts.
Nchekwa netwọkụ na Nrube isi: Melite nchekwa netwọkụ n'ozuzu site na ịchọpụta adịghị ike na nyocha adịghị ike. Nyochaa ma manye nrube isi na ụkpụrụ nchekwa dị oke mkpa site na iji akụkọ OOB maka FISMA, PCI DSS, wdg.
Njikọ Enweghị Ndozi: Nkwado agbakwunyere mbụ maka ndị na-ere ngwaọrụ netwọk ama ama dị ka Cisco, HP, Juniper, D-Link, Brocade na ndị ọzọ.
Akụkọ nhazi na ntụnyere: Jikwaa akụkọ nhazi niile nke ngwaọrụ. Ndị ọrụ nwere ike iji nhazi ngwaọrụ atụnyere iji hụ na nrube isi na nhazi.
Njirimara akpaaka netwọkụ
Nweta ọkwa maka mkpa na ihe omume nwere ike ibu amụma na nchọpụta anomaly
Nhazi na mgbanwe njikwa
Nyefee nhazi ngwaọrụ netwọkụ n'ọtụtụ ka inyocha, ndabere, na dozie ọdịda ngwaike yana mperi mmadụ
Nchekwa ntụkwasị obi
Ihe owuwu nwere ọtụtụ ihe nwere njikọ dị ike na-echekwa netwọkụ gị ka ọ dị ọ dịtụbeghị mbụ
inyocha Automation netwọkụ
Netwọk Automation nke Motadata na-enye automation smart yana nrụzi dị elu nke na-eme ka ọ dị na netwọkụ gị wee chekwaa gị na ọdịda nwere ike ịda.
Kedu ihe bụ Automation Network?
Network Automation bụ mmejuputa iwu nke automating omume nke nhazi, ijikwa, nwale, idowe, ma na-arụ ọrụ netwọk na ngwaọrụ ejikọrọ.
Gịnị kpatara akpaaka netwọkụ ji dị mkpa?
Ezigbo Network Ihe ngwọta akpaaka Ebumnuche ịkwalite akụrụngwa IT na-agbakwunyeghị ndị ọrụ IT ma ọ bụ ngwaọrụ ọhụụ ọ bụla. Ndabere na mgbagwoju anya nke netwọk na-eme ka ọ dị oke egwu hazie na machiini it n'ụzọ kwesịrị ekwesị.
Otu esi ahọrọ ezigbo ngwọta njikwa nhazi netwọkụ?
A ọma Automation netwọkụ ngwọta kwesịrị inwe ike ịkwalite arụmọrụ netwọk gị ma nọgide na-enwe ezi ahụike. Na ọnụ ọgụgụ nke ọdịda na ihe ịma aka, ọ kwesịrị machiini usoro na nyere azụmahịa gị aka ito eto ma kwụsie ike n'ahịa n'etiti ndị asọmpi.